လက်ကား Europe Round Stripe Sweet Hybrid F1 Melon အစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အဝါ၊ လိမ္မော် ပင်ရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SX Qilin မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အသားရေ: အဝါရောင် အသီး အလေးချိန်: 2.5-4 ကီလိုဂရမ် သကြားပါဝင်မှု : 15-17% အရသာ- ကြွပ်ဆတ်သော ဖျော်ရည် ခုခံမှု- မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ရင့်ကျက်မှု ရက်များ- ရက် 60 ဝန်းကျင် အသားအရောင်- လိမ္မော်ရောင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO9001;ISTA;CO;CIQ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် တစ်ခုလုံး...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အနက်၊ အစိမ်း၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- ဟိုင်နန်၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ဧကရာဇ် No.1 မျိုးစပ်: YES အသီးအသားရေ- အစိမ်းရောင် အရေခွံထူပြီး အစိမ်းရောင် နက်မှောင်သော အမြှေးပါးနှင့် သစ်သီးပုံသဏ္ဍာန်- နှစ်ရှည် အသီးအရောင်- အနီရောင်တောက်တောက် အသီးအလေးချိန်- 15-25kg သကြားပါဝင်မှု- 12% အထွက်နှုန်း- 35 တန်/ဧက ဝန်းကျင် ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Emperor No.1 China big f1 မျိုးစပ်ဖရဲသီးမျိုးစေ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ရွှေဖရုံသီးအစေ့များ အရောင်- လိမ္မော်ရောင် အနီရောင် ပင်ရင်းနေရာ- Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: Naivy မျိုးစပ်: YES အသားရေ: လိမ္မော်ရောင် အသားအရောင်: လိမ္မော်နီ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အသီးအလေးချိန်:2ကီလိုဂရမ် အစေ့အမျိုးအစား: F1 စပ်မျိုးစေ့များ ရင့်ကျက်မှု- ၉၅ ရက်ခန့် သန့်ရှင်းမှု- 99.0% သန့်ရှင်းမှု: 95.0% လက်မှတ်: CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Naivy တရုတ်လိမ္မော်ရောင် သြဂဲနစ်ရွှေဖရုံစေ့အစေ့ F...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ပုလဲမျိုးစပ် အမျိုးအစား- YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်- Oblong အသီး အလေးချိန်- 12-15kg အသားအရောင်- တောက်ပသော အနီရောင် ကြီးထွားလာမှု သံသရာ- 82-86 ရက်များ သန့်ရှင်းမှု : 98% သန့်ရှင်းမှု : 98% ပေါက်နှုန်း : 90.0 % Min Certification : CO;CIQ;ISTA ;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Big Pearl Chinese oblong ဖရဲသီး အစေ့များ ရောင်းရန်ရှိသည် 1. မျိုးစပ်ထားသော gi...
အလွန်စောစီးစွာ ရင့်ကျက်မြင့်မားသော အသီးများ ကြီးထွားရန်အတွက် စပ်မျိုးဝိုင်းဝိုင်းရှိသော ဖရဲစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့များ၊ အစောကြီးရင့်ကျက်သော မျိုးစပ်ဖရဲမျိုးစေ့ အရောင်- အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်: အနီရောင် Jombo မျိုးစပ်: YES ရင့်ကျက်မှု ရက်များ: 65-70 ရက် အသီးအသားရောင်: အဝါရောင် အသားအရောင် : လိမ္မော်ရောင် အသားအရောင် အသီးပုံသဏ္ဍာန် အသီးပုံသဏ္ဍာန် : ကမ္ဘာလုံး အသီး အလေးချိန် : 1.8 ကီလိုဂရမ် သကြား ပါဝင်မှု : 14-15% ခုခံမှု : အမှုန့် မှိုတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည် မြင့်မားခြင်း ထုပ်ပိုးခြင်း : 100g/အိတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် : CIQ;CO;ISTA;I...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့ အရောင်- အနီရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: Xing Ha မျိုးစပ်ခြင်း- YES အသီးပုံစံ- ဘဲဥပုံရှည် အသီးအရေ- ပါးလွှာကျော့ အသွင်အပြင် အသားကောင်း အရောင်- အနီရောင် အသီး အလေးချိန် : 3-4kg ရင့်ကျက်မှု- အလယ်အလတ်ရင့်ကျက်မှု Brix: 16%-18% အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Xing Ha စပ်အနီရောင်အသားမွှေး ဖရဲသီးအစေ့များ 1. အသား- အနီရောင် အစေ့များ...
စိုက်ပျိုးရန်အတွက် 2021 f1 စပ်မျိုးခရမ်းသီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ခရမ်းစေ့ အရောင်: အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင် မူရင်းနေရာ: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXE No.2 မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: Cylindrical Fruit Size: အရှည် 25-30 စင်တီမီတာ၊ 5၊ အချင်း -8 စင်တီမီတာ အသီးအနှံသတ်မှတ်ခြင်း- ကောင်းမွန်သော သိုလှောင်မှုဘဝ- တာရှည်ထုပ်ပိုးမှု- 10 ဂရမ်/အိတ် ထောက်ခံချက်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် 2021 F1 စပ်မျိုးခရမ်းသီးမျိုးစေ့များ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် 1. အလွန်ကြီးထွားသန်စွမ်း....
စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အစောပိုင်း အဝါရောင် အသားစပ် ဖရဲသီးမျိုးစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးမျိုးစေ့ အရောင်- အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ဖီးနစ်မျိုးစပ်အသေးစား: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အလေးချိန်: 1-1.5 ကီလိုဂရမ် ခေါက်ဆွဲအရောင်- အစိမ်းဖျော့ အသားအရောင်- အဝါရောင်အသားထွက်သကြားပါဝင်မှု- 13% ထောက်ခံချက်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အဝါရောင်အသားစပ်ဖရဲသီးမျိုးစေ့များ 1. ၎င်းသည် အလွန်စောပြီး ရင့်မှည့်သည့်မီနီဝပ်...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်: CW No.1 မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်- အဝိုင်းအသီး အသားရေ- အစိမ်းနုရောင် အသားအရည်နှင့် အလင်းတန်း အစင်းကြောင်းများ အသီး အလေးချိန်- 12-18kg သကြားပါဝင်မှု : 13% အသားအရောင် : အနီရောင် သန့်ရှင်းမှု : 99% မျိုးပေါက်နှုန်း : 98% အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု : 8% သန့်ရှင်းမှု : 99% အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် : CIQ;CO;ISTA ;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Chines...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၁၄